Lufthansa sy Deutsche Bahn dia namoaka fiaran-dalamby haingana an'ny DB Sprinter mankany amin'ny seranam-piaramanidina Frankfurt
Home » Fitsangatsanganana an-dalamby » Lufthansa sy Deutsche Bahn dia namoaka fiaran-dalamby haingana an'ny DB Sprinter mankany amin'ny seranam-piaramanidina Frankfurt
Amin'ny fanitarana ny fiaraha-miasa amin'izy ireo, Lufthansa sy Deutsche Bahn dia mametraka fenitra vaovao amin'ny fomba fitaterana tambajotran-tserasera
Fifandraisana New Lufthansa Express Rail mankany amin'ny seranam-piaramanidina Frankfurt avy any Berlin, Hamburg, Bremen, Münster ary Munich
Lamasinina haingam-pandeha haingam-pandeha haingam-pandeha: Fotoana fohy noho ny dia eo anelanelan'ny ivon-tanàna lehibe Alemanina
Safidy misimisy kokoa momba ny serivisy sy mailaka omena ny mpanjifa Lufthansa
Lufthansa sy Deutsche Bahn dia mifantoka amin'ny fanitarana haingana ny serivisy miaraka amin'ny seranam-piaramanidina. Tany Frankfurt androany, ireo orinasa roa ireo dia nanolotra ny tetikasan'izy ireo amin'ny fandraisana andraikitra iraisan'ny vokatra. ny Lufthansa Hanitatra tanàna dimy fanampiny ny tambajotra Express Rail. Manomboka amin'ny volana Desambra dia handeha ihany koa ilay antsoina hoe "Sprinter", izay lamasinina haingam-pandeha haingam-pandeha Seranam-piaramanidina Frankfurt sambany. Amin'ny fanitarana ny fiaraha-miasa i Lufthansa sy i Deutsche Bahn dia mametraka fenitra vaovao amin'ny fomba fitaterana tambajotran-tserasera.
Harry Hohmeister, mpikambana ao amin'ny Birao Mpanatanteraka ao amin'ny Deutsche Lufthansa AG, dia nilaza hoe: "Miaraka amin'ity fandraisana andraikitra ity, manamafy ny tolotra fivezivezena izahay any Alemana, ary manamafy ny toekarena eo an-toerana. Amin'ny fampifandraisana an-tsakany sy an-davany ny fitaterana an-dalamby sy fiaramanidina dia manome ny mpanjifanay tamba-jotra tsy misy fotony izy ireo, mahasoa ny mpanjifa sy ny tontolo iainana. ”
Mpikambana ao amin'ny birao DB Berthold Huber: "Ny fiaraha-miasa tsara dia mivadika fiaraha-miasa feno, izay mbola tsy nisy nahita toy izany teo amin'i Lufthansa sy Deutsche Bahn. Amin'ny faran'ny taona, hanitatra ny rohy misy eo amin'ny foibe lehibe indrindra any Alemana sy ny fifandraisana Sprinter vaovao i DB. Ho haingana sy hahazo aina kokoa ny dia amin'ny lamasinina. ”
Tambajotra lehibe kokoa sy “Sprinters” haingam-pandeha vaovao
Deutsche Bahn sy Lufthansa dia efa manolotra lamasinina feeder 134 isan'andro mankany amin'ny seranam-piaramanidina Frankfurt avy amin'ny tanàna 17 alemanina. Amin'ny tapany faharoa amin'ny 2021, hisy tanàna dimy hafa hanampy. Manomboka amin'ny volana jolay, sambany, azo atao ny mandeha mankany amin'ny seranam-piaramanidina Frankfurt miaraka amin'ny Lufthansa Express Rail avy any Hamburg sy Munich, ary manomboka amin'ny Desambra ny Berlin, Bremen ary Münster.
Ho fanampin'izay, ny fifandraisana Sprinter vaovao dia hanomboka ny volana desambra. Ny dia an-dalamby anelanelan'ny Munich sy Cologne dia hahena ho efatra ora. Avy any Munich sy Nuremberg, hisy fiaran-dalamby mivantana mankany amin'ny seranam-piaramanidina Frankfurt indroa isan'andro ao anatin'ny adiny telo sy roa, tsy misy fijanonana fanampiny eo anelanelany - antsasak'adiny haingana kokoa noho ny androany ary ara-potoana ara-potoana amin'ny fiaingan'ny sidina sy ny fahatongavan'ny sidina. Hub an'i Lufthansa.
Fampaherezana mihamitombo sy famandrihana malefaka kokoa
Ny endri-javatra rehetra nosedraina sy voasedra tamin'ny programa Lufthansa Express Rail, toy ny fiaran-dalamby mitaingina fiaramanidina, fiantohana fifandraisana, accrual kilometatra ho an'ny dia an-dalamby ary koa ny dia an-kilasy voalohany sy ny fidirana amin'ireo efitrano fandraisam-bahiny DB ho an'ny orinasa ary koa ny Voalohany Mpanjifa kilasy, mazava ho azy fa hitohy ho misy. Hanampy serivisy fanampiny amin'ny ho avy. Ny lamasinina Express Rail dia ho mora fantarina noho ny marika DB-LH iraisana amin'ny lalàm-by maro. Ny fampahalalana LH dia azo alaina amin'ny lamasinina amin'ny alàlan'ny WLAN maimaim-poana koa. Ireo mpandeha mamandraharaha Business na Frist kilasy voalohany, mankafy ny serivisy DB Premium amin'ny kilasy faha-1 sy ny sakafo an-tsambo maimaimpoana.
Ho mora kokoa ihany koa ny fitaterana sy ny fitehirizana entana: aleon'i Deutsche Bahn ny mampiasa lamasinina faratampony miaraka amin'ny efitranon'ny valizy lehibe. Raha vantany vao miakatra indray ny fifamoivoizana eny amin'ny seranam-piaramanidina dia homena fidirana amin'ny lalana haingana any amin'ny toeram-pisavana ny mpanjifa Lufthansa Express Rail. Ankoatr'izay, rehefa miakatra amin'ny seranam-piaramanidina Frankfurt dia hatao loha laharana ny valin'ny mpanjifa Express Rail.
Ny famandrihana ny tapakilan'ny Lufthansa Express Rail dia hihamora kokoa. Manomboka amin'ny aprily 2021, ny lamasinina feeder dia azo alefa raha mbola azo atao ny mamandrika ny sidina mifandray. Mandritra izany fotoana izany dia mandoa vola ny mamandrika mialoha, izay midika fa mora kokoa ny tapakila. Zava-nisongadina manokana tamin'ity taona ity: ny mpanjifa Miles & More dia hahazo kilometatra avo roa heny amin'ny dia rehetra an'ny Lufthansa Express Rail, toy ny amin'ny sidina rehetra.
Mandeha sy mihetsika ny fizahan-tany any Malezia